यी ५ गुण भएका व्यक्ति कहिल्यै जीवनमा असफल कहिल्यै हुँदैनन् !! – jagritikhabar.com
५. मेहनती= मेहनत गर्ने सबै मानिस सफल हुन्छन् नै भन्ने हुँदैन’ भनेर हामी सबैले भन्ने गर्छौं । तर यो पनि वास्तविकता हो कि, मेहनत नगरी प्राप्त गरेको कुनै पनि उपलब्धी दिगो हुँदैन । आचार्य चाणक्य पनि भन्छन् कि, सफलता प्राप्तिका लागि मेहनतको विकल्प हुँदैन । र, मेहनत गर्ने व्यक्ति पक्कै सफल हुन्छन् ।